Hetsika ho an'ny mpianatra mahaliana: fomba fijery maoderina momba ny olana
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Hetsika ho an'ny mpianatra mahaliana: fomba fijery maoderina momba ny olana
Ny adihevitra momba ny hoe raha tokony hanana hetsika miompana amin'ny fampiroboroboana ny fahaizan'ny kognitika ny mpianatra dia maharitra mandritra ny taona maro. Na dia mino aza ny sasany fa tsy misy dikany ny hetsika kognita, ny sasany kosa milaza fa fomba iray hanomanana ny sain'ny ankizy ho an'izao tontolo izao. Amin'ny fiasa amin'ny famahana olana, ny fandraisana fanapahan-kevitra ary ny fahaiza-manao mitovy amin'izany, ireo asa ireo dia manomana azy ireo amin'ny fiainana.
Misy tanjona ve amin'ny fampiharana hetsika kognitika ao an-dakilasinao? Ity misy fomba fijery maoderina momba ny olana sy ny fomba ahazoan'ny ankizy tombony amin'ireo asa ireo!
Inona ny tanjon'ny hetsika atao amin'ny fahalalana kognitive?
Ny tanjona dia ny hamoronana toerana anaovan'ny mpandray anjara ny fanadihadiana, ny fahaiza-mamorona, ny lojika ary ny fahaiza-manao mifandraika amin'izany hamahana olana na hanome valiny momba ny lohahevitra. Ny fomba marina dia mety miovaova, izay manome anao safidy betsaka hamolavola asa sahaza ho an'ny vondrona misy anao.
Ny fikarohana ara-tsiansa dia manohana ny filazana fa ny hetsika kognitika dia mety hahomby amin'ny ankizy. Ny Fikarohana momba ny fahazazana dia namoaka a fianarana misy zaza 840 izay sokajin-taona samy hafa manomboka amin'ny folo volana ka hatramin'ny enin-taona. Nasehon'ny mpanoratra fa mety hisy fiantraikany amin'ny fahaizan'ny zaza ny hetsika filalaovana kognitika sy famoronana. Midika izany fa io fomba fiasa io dia mihoatra ny teoria fotsiny.
Tanjona lehibe amin'ny fianarana kognitive
Na dia tokony manomana ireo asa arakaraka ny haavon'ny fampianarana aza ianao, dia hitohy foana ny tanjona. Ity misy topy topimaso momba izay azonao atao amin'ny hetsika kognitika sy ny fomba ampifanarahana azy ireo amin'ny mpianatrao.
Ny tanjona dia ny hiteraka fahatsiarovana ny olona iray. Mety ho tsara ny mahita raha mahatadidy zavatra tamin'ny kilasy teo aloha ny mpianatra. Hadinoy ny fotoam-pianarana Q&A mahazatra ary angataho ny ankizy hanoratra fehintsoratra iray amin'ny fampahalalana tena lehibe indrindra amin'ny lesona farany. Tongasoa izy ireo hanoratra izay tadidiny.
Raha mampianatra tantara ianao dia azonao atao ny mangataka azy ireo hametraka fotoana miseho. Tsy mila miziriziry amin'ny ora marina nitrangan'ny ady iray ianao. izany rehetra izany dia ny famoahana ny ati-doha hametraka azy ireo amin'ny filaharana mety.
Sarotra ny ho profesora amin'ny andro maoderina. Tsy azonao antoka akory hoe mihaino ny ankizy, mainka ve fa tsy ho azonao izay resahinao. Izany no antony ahafahanao mitarika ny ati-dohany hijerena ny fampahalalana amin'ny lafiny hafa.
Ohatra, entano izy ireo hanana adihevitra momba ilay lohahevitra. Raha mpampianatra sosiolojia ianao dia mifantoha amin'ireo fironana ankehitriny. Angataho ny mpianatra iray hiaro ny tambajotra sosialy ary ny iray hafa hitsikera azy ireo. Tokony hanana fahalalahana hanolotra tohan-kevitra izy ireo satria ny hampisy azy ireo hieritreritra.
Ahoana no hamahanao olana iray rehefa miatrika izany amin'ny tena fiainana ianao? Mitovy foana ny fomba fiasa - mamakafaka ilay olana ianao ary miantehitra amin'izay fantatrao hamahana azy. Mety hieritreritra olana mialoha ny profesora ary hanolotra izany eny amin'ny solaitrabe. Manana fotoana voafetra ireo mpianatra hanolotra vahaolana amin'ny fampiasana ny fahalalana sy ny fahaizana azony hatreto.
Ny ankizy dia tokony hianatra ny fomba famakafakana izay efa fantany sy handray fanapahan-kevitra marim-pototra mifototra amin'izany data izany. Izany dia afaka manampy azy ireo hampivelatra fomba marani-tsaina amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny ho avy.
Azonao atao ny mangataka amin'ny mpianatra mba hamakafaka olana na fanapahan-kevitra manokana amin'ny alàlan'ny fanaovana lisitry ny lafitsara sy lafy ratsy. Io fomba fianarana io dia afaka mampiharihary ny fomba fandanjana ny safidiny sy hisafidianana izay mety. Miankina amin'ny lohahevitra noresahina, azonao atao ny mangataka ireo mpandray anjara mba hamolavola graf mba hanehoana ny fampahalalana amin'ny fomba takatra na hamolavola fanontaniana mba handaminana ny angon-drakitra misy.
Ny asa famoronana dia manome anao fahalalahana betsaka amin'ny ambaratonga tsirairay - hatramin'ny sekoly ambaratonga voalohany ka hatramin'ny oniversite. Ny tanjona dia ny hikolokoloana ny fahaizan'ny mpianatra ary hampita ny hevitra tany am-boalohany hamahana ny olana.
Ireto misy tolo-kevitra momba ny hetsika kognita izay mifantoka amin'ny famoronana:
Angataho ny mpianatra hanoratra tononkalo momba ny lohahevitra manokana
Manomàna asa iray hanomanana torolàlana ho an'ny olona iray izay mampiasa vokatra / serivisy / fomba manokana voalohany
Manorata tantara fohy na lahatsoratra iray izay miresaka olana manokana (hanoanana eran-tany, areti-mandringana, olana mifandraika amin'ny lesona ankehitriny, sns.)
Manomàna scenario hampiasaina ho kabary hanehoana hevitra
Ny hetsika kognitive ho an'ny mpianatra dia mety hanampy amin'ny ambaratonga fanabeazana rehetra. Na profesora amin'ny anjerimanontolo ianao na miasa amin'ny kilasy voalohany, ireo asa ireo dia mety hitondra valiny. Mahafinaritra ny mahita fa be kokoa ny mpampianatra eran-tany no manaiky an'io fomba io sy mampiasa azy io any an-dakilasy. Ny fifantohana amin'ireo lahasa ireo dia tsy vitan'ny hoe mitaiza ny fahaizan'ny zaza misaina fotsiny. Mampientanentana azy ireo ihany koa izany satria hitany fa mahafinaritra sy mahafinaritra ny hetsika.
Annabelle Gratwick dia mpamaham-bolongana miasa Edusson.com. Manam-pahaizana amin'ny fanabeazana izy ary manana traikefa an-taonany maro amin'ny fampianarana ireo mpianatra amin'ny ambaratonga samihafa. Annabelle dia manana famoahana maro amin'ny gazety mifandraika ary tiany ny mitoraka bilaogy momba ny fanabeazana.